Ukwaziswa okufutshane kunye neenkcazo zeJografi
Inzululwazi ye-geography mhlawumbi indala kunazo zonke izazinzululwazi. IJografi iyimpendulo yombuzo abantu bokuqala babuza, "Kuphi na?" Ukuhlolisiswa kunye nokufumanisa iindawo ezintsha, iinkcubeko ezintsha, kunye neengcamango ezintsha zihlala ziyinxalenye esemqoka ye-geography.
Ngaloo ndlela, i-geografi idla ngokuba ngu "unina wezayensi zonke" njengokufunda abanye abantu kunye nezinye iindawo ezikhokelela kwezinye iindawo zesayensi ezifana ne-biology, i-anthropology, i-geology, i-mathematics, i-astronomy, i-chemistry, phakathi kwabanye.
(Funda ezinye iinkcazo zeJografi )
Lithetha ntoni iLizwi leJografi?
Igama elithi "geography" laqulunqwa ngumphengululi waseGrike u- Eratosthenes kwaye ngokuqinisekileyo lithetha "ukubhala ngomhlaba." Igama lingahlula zibe ziincini ezimbini - ge negraphy . IG ithetha ukuba umhlaba kunye negrafu kubhekisela ekubhaliseni.
Kakade, i-geography namhlanje ithetha okungakumbi kunokubhala malunga noMhlaba kodwa kunzima ukuchazwa. Abaninzi beegografi baye benza konke okusemandleni abo ukuchaza i-geography kodwa incazelo yesichazi-magama namhlanje ithi, "Isayensi yezinto ezisemzimbeni, izixhobo, imozulu, ubuninzi, njl.
Namhlanje, i-geografi iyahlula ngamasebe amabini amakhulu-i- geografi yeenkcubeko (ebizwa ngokuba yi-geography yabantu) kunye ne-geographie ngokomzimba.
Ijografi yenkcubeko yisebe lejografi ejongene nenkcubeko yabantu kunye nefuthe layo kwiMhlaba. Iingcali zezobugcisa zenzululwazi zifunda iilwimi, inkolo, ukutya, izakhiwo zokwakha, indawo zedolophu, ezolimo, iinkqubo zokuthutha, ezopolitiko, ubutyebi, ubuninzi beemfuno zabantu, kunye nokunye.
Ijografi yezinto ezibonakalayo yisebe lejografi ejongene nemvelo yendalo, ikhaya labantu. Ijografi yezinto ezibonakalayo ibheka amanzi, umoya, izilwanyana kunye nomhlaba womhlaba (oko kukuthi yonke into eyingxenye yamacandelo amane-umoya, i-biosphere, i-hydrosphere, i-lithosphere).
I-geografi yezinto eziphathekayo ihambelana ngokusondeleyo kwenzululwazi yesayensi ye-geology - i-geology - kodwa i-geographie yomzimba igxininisa ngakumbi kwimimandla esemhlabeni yoMhlaba kwaye kungekhona into ephakathi kweplanethi yethu.
Ezinye iindawo eziphambili zeendawo zendawo zibandakanya i-geografi yesithili (okubandakanya uphando olunzulu nolwazi lwendawo ethile kunye nenkcubeko yalo kunye nezixhobo zalo zomzimba) kunye nobuchwepheshe beendawo ezifana ne-GIS (iinkqubo zolwazi ngeendawo) kunye ne-GPS (inkqubo yokubeka indawo).
Inkqubo ebalulekileyo yokwahlula isifundo sejografi iyaziwa njengeNkcubeko ezine zeJografi .
Imbali yejografi njengengqeqesho yenzululwazi inokulandelwa kumfundi weGrike uEratosthenes. Kwakuqhutywe phambili kwixesha lanamhla nguAlexandro von Humboldt kwaye ukusuka apho, unokulandelela imbali ye- geography e-United States .
Kwakhona, khangela i-Timeline ye-History History.
Ukususela ekupheleni kwee-1980, xa i-geografi yayingafundiswanga kakuhle kwi-United States yonke, kukho imvuselelo kwimfundo yoluntu . Ngaloo ndlela, namhlanje abafundi abaninzi baseprayimari, abasesekondari nabanyunivesithi bakhetha ukufunda okungakumbi malunga ne-geography.
Kukho ezininzi iinkonzo ezifumaneka kwi-intanethi ukuze zifunde ngokufunda i-geografi, kubandakanywa nqaku elilodwa malunga nokufumana iqondo lekholeji kwi-geography .
Nangona eyunivesiti, qiniseka ukuba uphonononge amathuba emisebenzi ngamagosa e-geography .
UkuFunda ngokuKhulu kwiIjografi:
Iinqophiso Zamazwe Wonke
Imibuzo neempendulo malunga neJografi
I-Geography Facts, uList, ne-Trivia
Iimephu kunye neNdawo yeeNdawo malunga neLizwe lonke (kubandakanywa imephu engqaliweyo yeemephu)
Izizathu ezi-10 eziphezulu zokufunda iJografi (iHumor)
Emva kokuba uqale ukufunda i-geografi, uya kufuna ukujonga kwimisebenzi eyahlukeneyo kwi-geography ukuze ungaphuthelwa eli nqaku ngokuphathelele kwimisebenzi kwiJografi .
Ukujoyina inhlangano yelizwe kwaye kunceda njengoko uqhuba umsebenzi weendawo.
Iimveli ezine zeJografi
Unyaka omtsha wamatshayina
IiNxweme zamazwe ngamazwe
Siyintoni iSixeko soPhuculo?
Oko Kufuneka Ukwazi NgeGografi
Iipaki zeSizwe eziThambileyo e-United States
Iifayile kunye neeVuvu zisebenza njani?
Ukuguqula kunye neDash Projection Definition kunye neMzekelo
Insect Anatomy: Iingxenye zeCaterpillar
Ubuntu baseGrisi Yamandulo
Izilwanyana ze-Great Barrier Reef
Izakhono eziSebenzayo: Abafundi bethu kufuneka bafumane ukuzimela
I-Misquote: uBenjamin Franklin ngeBhiya
Iphrofayili yaseHubert Green Career
Injongo Yenene yeSimbova seLinga yeSimboli
Iingcebiso zokufihla iintlanganiso njengeendaba zeendaba
Funda Ngezivakalisi eziHlanganisiweyo kwaye Jonga imizekelo
Unomdla ngeParet Mars?
Umzabalazo wendawo yama-1960
Ukwakhiwa kweeNcwadi eziMiselweyo
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uCharles Griffin
Uneliseko Nobomi - Abafilipi 4: 11-12
Isiqalo seBass Chords for Piano